Indawo yabucala & eyahlukileyo Kufuphi edolophini!
*** Ukungena kule ndawo kukwisango le-alley engasemva, nceda ujonge iinkcukacha zengingqi kunye nezimvo zeendwendwe zangaphambili ngaphambi kokubhukisha ***
Kulula ukubhukisha! Akukho ntlawulo yokucoca! Akukho deposit! Ukurhoxiswa okuguquguqukayo! Indawo yokupaka yasimahla! Inendlu yokulala enefenitshala e-1 esetyenziselwa u-Airbnb kuphela. Indawo yokungena yabucala, ikhitshi, ibhafu epheleleyo, igumbi lokuhlala, kunye nendawo yokupaka egayiweyo. I-queen bed e-1, ibhedi egcweleyo eyi-1, kunye newele eli-1 esongwayo/ibhedi enye. Ibekwe ngokufanelekileyo, kwindawo endala, edolophini*
Malunga ne-500sqft. Inkulu kwaye ixhotyiswe ngakumbi kunegumbi lehotele elisemgangathweni (ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokulala elahlukileyo). Igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, ipatio yabucala, kunye nekhitshi enkulu / isiqithi esiphindwe kabini njengetafile yokutyela okanye indawo enkulu yokusebenza. Isanda kulungiswa ngo-2013. Indawo yokuhlala ilungiselelwe ukuba isetyenziswe njengendawo yokurenta ka-Airbnb kuphela.
4.94 ·Izimvo eziyi-355
4.94 · Izimvo eziyi-355
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi355
IAesthetics-Indala, idolophu, indawo yokuhlala yabasebenzi, ime kwiimayile ezi-5 ukusuka edolophini eSan Diego. Amakhaya amaninzi kulo mmandla akhiwa ngeminyaka yee-1950. Le AYIYOndawo ephezulu, kwaye sithengile indawo ngexabiso engqondweni. Njengoninzi lweendawo ezihlala isixeko esikhulu eSoCal, yimbiza enyibilikayo yabantu. Uya kubona abantu beemilo ezahlukeneyo, ubukhulu, imibala, iinkcubeko, ubuhlanga, uqhelaniso, isini, kunye nemeko yentlalontle yezoqoqosho ukubandakanya abantu abangenamakhaya / abadlulayo.
Ingxolo- Ingxolo egqithileyo ayibanga yingxaki. Ekuseni nangokuhlwa, ubusuku buzolile. Emini, uya kuva ingxolo yesitrato kwiimoto kunye neebhasi ezidlulayo.
***Ngeeholide ezinkulu abamelwane bayathanda ukubhiyozela! NgoJulayi 4, uEva woNyaka oMtsha, kunye neHalloween uya kuva iziqhumane, umculo, kunye nabantu ababhiyozela kwiiyure zokugqibela ***
Ukhuseleko-Siziva sikhuselekile apha kwaye kufuneka nawe! Sihlale kule ngingqi iminyaka eyi-8+ kwaye sisindleke ngaphezulu kwe-500 yokubhukisha iindwendwe ukusukela ngo-2013. Yonke le ndawo ibiyelwe kwaye igayiwe kwaye sigcina iindawo eziqhelekileyo zikhanyiswe kakuhle ebusuku.
1. Uya kuba nemfihlo yakho, asiyi kuba kwishishini lakho, lol
2. Inkqubo elula yokungena: Sizakubulisa ngezitshixo kunye neekhowudi zesango xa ufika, sikubonise indawo yokupaka kunye nokusebenza kwesango, emva koko siya kuba sisendleleni!
3. Inkqubo elula yokuphuma- Shiya izitshixo kwikhawuntara yasekhitshini, usithumelele umyalezo obhaliweyo, emva koko ube endleleni yakho!
4. Umamkeli osoloko efumaneka ngokufowuna/ngokubhaliweyo.
2. Inkqubo elula yokungena: Sizakubulisa ngezitshixo kunye neekhowudi zesango xa ufika,…